चार बर्षीय बालकको अपहरण गरी हत्या
कलैया, १३ माघ । कलैया नगरपालिका वडा नं ५ बस्ने मोतीलालप्रसाद साहका चार वर्षीय छोरा आशीषकुमार साहलाई गएराति अज्ञात व्यक्तिले अपहरण गरी हत्या गरेको छ । गएराति करिब १० बजे आमा छिमेकीको घरमा गएका...
नेविसंघले ‘जबर्जस्ती’ गरेपछि वीरेन्द्र क्याम्पस प्रमुखसहित ६ प्राध्यापकद्वारा राजीनामा
चितवन, १३ माघ । विद्यार्थी सङ्गठन र क्याम्पस प्रशासनबीचको विवादका कारण चितवनको वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस आज ठप्प बन्न पुगेको छ । वीरेन्द्र क्याम्पसमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घले कारागारभित्रै आक्रमणमा परी मारिएका शिव पौडेलको स्मृतिमा सरस्वतीको...
भन्सारले दियो अनाथ वालवालिकालाई १२ बोरा चामल
महेन्द्रनगर, १३ माघ । त्रिसट्ठिऔँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा गड्डाचौकी भन्सार कार्यालयले महेन्न्द्रनगरस्थित बाल अनाथालयलाई खाद्यान्न र स्टेशनरी सामान सहयोग गरेको छ । भन्सार कार्यालयले सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रमको आयोजना गरी महेन्द्रनगरस्थित महाकाली अञ्चल बाल...
कालले चुँडेर लग्यो ‘एमाले बा’ लाई
भद्रपुर, १३ माघ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एमाले झापाका पहिलो सदस्य रुद्र चापागाईंको निधन भएको छ । ८८ वर्षको उमेरमा सोमबार साँझ आफ्नै निवास तोपगाछी–७ केरखामा उहाँको निधन भएको हो । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा...
पु्ल नहुदा ५ जनाको कसरी मृत्यु भयो ? हेर्नुस !
महेन्द्रनगर, १३ माघ । पुल नभएर मान्छेको मृत्यु भएको खबर सायदै होला । तर कञ्चनपुरको दोदा नदीमा पुल नहुदा ५ जनाले अकालमै ज्यान गुमाएका छन् । जिल्लाका अधिकांश भागलाई दोदा नदीले बाढीको चपेटामा पारी...
वार्तासँगै प्रक्रियालाई अघि बढाउने काँग्रेस र एमालेको निर्णय, आज निर्णायक छलफल
काठमाडौँ, १३ माघ । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)ले सहमतिको ढोका खुला राख्दै संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको दुई दलको बैठकले संविधानसभामा फरक मत...
यात्रु बस ठोक्किँदा दुईको मृत्यु
कपिलवस्तु, १३ माघ । पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कपिलवस्तुको चन्द्रौटा पश्चिम बनकसवासा घुम्तिमा दुई यात्रुवाहक बस एकापसमा ठोक्किदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा दाङ विजौरी- ३ का २७ वर्षीय गणेश खड्का र सुनसरी...
यस्तो छ एमाओवादी गठबन्धनको चरणबद्ध आन्दोलन कार्यक्रम
काठमाडौँ, १३ माघ । एकीकृत नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको ३० दलीय गठबन्धनले सहमतिको प्रक्रियाबाट सत्तारुढ दल बाहिर गएको आरोप लगाउँदै सडक सङ्घर्षको घोषणा गरेको छ । संविधानसभाभित्र रहेका १९ दल र बाहिरका ११ दलको संयुक्त...
काँग्रेस लमजुङका नेता गुरुङको निधन
काठमाडौँ, १२ माघ । नेपाली काँग्रेस लमजुङका नेता एवम् समाजसेवी तेजबहादुर गुरुङको ५१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उच्च रक्तचापबाट पीडित गुरुङको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा शल्यक्रियापछि सोमबार निधन भएको हो । उहाँँको पार्थिव शरीरको...
नेम्वाङ पेलेरै जाने मनस्थितिमा, प्रश्नावली समितिको बैठक १७ गते आह्वान
काठमाडौँ, १२ माघ । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रश्नावली समितिको बैठक यही माघ १७ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाउनुभएको छ । एकीकृत नेकपा (माओवादी)लगायतका विपक्षी दलको विरोधका बीचमा सभाध्यक्ष नेम्वाङले आइतबार बसेको संविधानसभाको...
राष्ट्रपतिले बोलाएर ओलीलाई के भने ?
काठमाडौँ, १२ माघ । राजनीतिक गतिरोध लम्बिँदै जाँदा राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । सोमबार शीतलनिवास पुग्नुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई राष्ट्रपति डा यादवले संविधान निर्माण प्रक्रियामा...
नेम्वाङलाई आफ्नै जिल्लामा प्रवेश निषेध
जंग योञ्जन तामाङ पाँचथर, १२ माघ । संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई गृहजिल्ला इलाम र छिमेकी पाँचथर प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । सङ्घीय लिम्वूवान पार्टी नेपालले नेम्बाङलाई प्रवेशमा रोक लगाएको घोषणा गरेको हो । पाँचथर...
« 1 … 6,103 6,104 6,105 6,106 6,107 … 6,670 »